Izindandatho zePlatinum - imihlobiso emangalisayo
Imfashini, Amabhlogo & Amawashi
Amasongo wePlatinum ayihlobiso enhle kakhulu ethandwa kakhulu namhlanje. Babonakala bebiza kakhulu futhi behle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, izindandatho ze-platinum ziyi-investments ehle kakhulu, ngoba ngokuhamba kwesikhathi inani labo liyakhula kuphela. Imikhiqizo enjalo igcizelela kahle ukuvumelana nokuma komnikazi wayo. Izindandatho ziyakwazi ukumelana nezimpande futhi zikwazi ukumelana nazo. Futhi ukubakhathalela kulula kakhulu. Badinga nje ukugezwa ngamanzi afudumele futhi basula ngendwangu elithambile. Ebucayi nangobanzi, ebushelelezi futhi eqoshiwe, ngamatshe futhi ngaphandle kwayo - ububanzi bemikhiqizo bukhulu kakhulu.
Izindandatho zePlatinum ziyabiza futhi zinhle
Ngakho, ngaphezulu. Amasongo wePlatinum - ubucwebe kusukela ensimbi enenani eliyigugu kakhulu. Intengo yayo idlula izindleko zesiliva cishe izikhathi eziyikhulu. Lo umehluko uchazwa yi-reserve elinganiselwe ngokwemvelo ye-platinum nobunzima bokucubungula le nsimbi.
Emashumini ambalwa nje adlule le ndaba yayingabizi kakhulu. Ngakho-ke, wanezelwa ngama-jewelers kuya kuma-alloys esiliva negolide ukuze asindise. Namuhla isimo sesishintshile ngokuphawulekayo. I-Platinum iyaziswa.
Indlela ongakhetha ngayo
Yini okufanele ngiyiqaphele lapho ngithenga ukucweba? Okuhle kakhulu ukubuka izindandatho zeplatinamu ezinedayimane. I-tint eyisigqoko sokuthutha isona sangemuva esiphelele samatshe ayigugu. Ngokuhlanganiswa ne-platinum, ngisho namadayimane amancane abonakala eqhakazile futhi enokunethezeka.
Izindleko ngaphandle kokufakwa zingcono ukukhetha isakhiwo esingavamile. Futhi zihlotshiswe ngokudweba okunzima noma ukuqoshwa. Ukuhlelwa kwezingubo ezivela ku-jeweler, nakanjani uthole izesekeli ezimangalisayo, ngokujwayelekile, kanye nalokho okufunayo.
Ngakho-ke, isimfanelo esingenakulinganiswa sesimo esiphakeme yizinsimbi zeplatinamu. Isithombe salezi zemihlobiso sibonisa ngokucacile ukuthi zibukeka kahle kanjani, zibukeka kanjani ngokukhazimulayo nangokucebile. Zihluke futhi ezinhlobonhlobo zabo ezingavamile. Isibonelo, hypoallergenic, ngenxa ye-inertia yayo ephelele, ubuhle. Nokho, ukusetshenzwa kwe-platinum kunzima kunezinye izinsimbi. Ngakho-ke, lapho wenza amasongo, abadwebi abaneminyaka eminingi abanolwazi basebenzisa kuphela imishini ephakeme ephezulu. Ngelinye igama, akuzona zonke izindwangu zezingubo eziziqhakazile ezingaziqhenya ngalezi zinhlobonhlobo kwiqoqo lakhe.
Izindandatho zePlatinum ezithandana nabashadayo zithengwa kaningi. Lokhu kuchazwa ukuthi usuku lomshado lubaluleke kakhulu empilweni yabo. Okusho ukuthi, bafanelwe leli holide elihle kakhulu. Ngokuvamile, bafuna ukukhetha izindandatho ezicacile, ezibizayo, ezinhle. Izizathu zokungabaza ngomqondo wesitayela sombhangqwana ezivela ezivakashi eziningi azigcini. Ngendlela, eminyakeni yamuva, izindandatho ezincane ze-platinum zitholakale ngaphandle kwezinga labo lomphakathi kanye nengcebo. Le mikhiqizo ithengwa ngabamabhizinisi abacebile, nezinkanyezi zesikrini, kanye "nabantu abathandayo."
Ukuqashelwa emhlabeni wonke kwalezi zesekeli zomshado ezinhle kuhlotshaniswa nezici eziningana ezihlukile zensimbi enhle. Yiqiniso, okokuqala - lokhu kuyigugu emakethe. I-Platinum iyinkulumo efana nezindleko ezinkulu nokunethezeka. Okwesibili, le ndaba ihlale iqinile. Imihlobiso eyenziwe nge-platinum yenziwa ngaphandle kokusetshenziswa kokungcola okuhlukahlukene, futhi lokhu kuphinde kugcizelele ukubaluleka kwale mikhiqizo. Ukuguqulwa kwendandatho akuthonywanga, ubunzima obuphezulu nokuqina akuvumela ukuba ungakhathazeki ngemikhakha kanye nezinhlamvu. Yebo, isici esikhangayo kunazo zonke, umbala we-platinum ongalingani. Kusuka kwamanye ama-shades ukuhlukanisa kalula kalula ngisho ne-connoisseur engenalwazi yokuhlobisa. Ngaphansi kokukhanyisa okuthile, ubuso obuhlaza obubonakalayo bubonakala bumhlophe. Kusukela ekusebenziseni kwansuku zonke, akusi mnyama.
I-Imperial Topaz - ubukhulu betshe
I-troy ounce yegolide, ngogremu lokhu kuyoba okungakanani?
Sitall (itshe): kuyini, izindawo kanye nesicelo
Isongo lesetshe liwumthombo wobuhle nempilo, kufinyeleleke kuwo wonke umuntu.
Shades of blonde nokwehluka
Indlela ukukhetha emngceleni icebo lakho engadini?
Eziyishumi izinhlelo-contender sesihloko "Igciwane eziyingozi kakhulu emlandweni we-Inthanethi"
Indawo emangalisayo - Isiqiwu sezilwane e Krasnodar